I-china Wholesale Power Full LED Driver Emergency - Umhlinzeki Womkhiqizi - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
Ikhaya > I-Full Power LED Driver Ephuthumayo
Le modeli ingafanisa i-voltage yokufaka kusuka ku-90V kuye ku-280V, futhi okukhiphayo kwamanje kudlula kumshayeli weLed, okwenza ukukhanya kwakho okuphelele kwamandla okukhanya kwe-LED lapho amandla ehluleka. I-DF168N isebenzisa isifunda sokulawula i-IC, inokusebenza okuzinzile, isifunda sokuhlukani......
Amaphakethe wamandla ophuthumayo we-LED Max25w - DF168H
Izici ze-DF168H Specialty Highlightï¼š â— ‡ Le kit iyahambisana nawo wonke amamojula we-LED anama-24w aphezulu futhi inokusebenza okuhle. Incazelo Yomkhiqizo Imodyuli yokukhanyisa eziphuthumayo i-DF168H yakhelwe ukuguqula anhlobonhlobo amalambu e-10w ~ 25w e-LED, okwenza izibani ziqhubeke zinamandla......
Izici ze-DF518H Specialty Highlightï¼š â— ‡ Le kit isebenzisa i-smart grade ephezulu kakhulu ye-IC ukulawula isekethe, nokunikela ngokuzihlola, ukuhlolwa kwanyanga zonke nomsebenzi wokuhlola wonyaka. I-DF518H ine-lithium yebhethri evikela i-IC, ivimbela ukukhokhisa okungaphezulu kwebhethri nokukhiph......
4.LED 36w ~ 60w Amaphakethe Wamandla Aphuthumayoâ € ”DF518H50
Izici ze-DF518H50 ezikhethekile ezigqamile I-DF518H50 ine-lithium yebhethri evikela i-IC, ivimbela ukukhokhisa okungaphezulu kwebhethri nokukhipha ngaphezulu. Incazelo yomkhiqizo DF518H50 eziphuthumayo ...
Izici ze-DF518H100 Specialty Highlise • I-DF518H100 inganikela ngesimo sokusebenza esihle kakhulu. Isixazululo sokuphatha kanye nesudi elikhethekile ekukhanyeni okukhulu kwezikhukhula zamandla, ukukhanya okuphezulu kwebha, umhubhe ...